Ururada Samafalka Caalamiga ah oo ka hadlay Xayiraada Shirkadaha Lacagta Soomaalida | SAHAN ONLINE
Ururada Samafalka Caalamiga ah oo ka hadlay Xayiraada Shirkadaha Lacagta Soomaalida
Hay’adaha samafalka ee ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey Xayiraada ay dawladda Kenya kusoo rogtay 13 kamid ah shirkadaha lacagta ee Xawaaladaha.
Shan iyo toban kamid ah ururada Samafalka ee ka hawlgala dalka Soomaaliya ayna kamid yihiin CARE Iyo OXFAM ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen ku sheegeen in lacagaha Soomaalidu u dirto qoysaskooda sanadkii gaareyso 1
bilyan oo doollar.
Warsaxaafadeedkooda ayey ku xuseen in go’aanka ay qaadatay dawladda Kenya ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ku tiirsana dhaqaalaha loo marsiiyo Shirkadaha Xawaaladaha.
Talaabadan ay qaaday dawladda Kenya ayey ku sheegeen mid joojineysa shaqooyinkii gargaarga ay hay’adahan ka hayeen gudaha dalka Soomaaliya maadaama uusan jirin wado kale oo lacagaha loogu gudbin karo gudaha Soomaaliya.
Sidoo kale,waxay sheegeen in dawladda Kenya la wadaagayaan walaaca ay ka qabaan kooxaha argagaxisada balse loo baahanyahay in dawladu si gooni gooni ah ugu eegto shirkad walba.